Laaluush iyo labeeb
Faarax Macallin oo ah siyaasi ka mid ah soomaalida Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa uu isbeddel weyni ku dhacay hantidiisa gaarka ah oo shakhsi ahaaneed. Sida ay dad badani og yihiin Faarax waxaa uu xoghaye guud ka yahay urur Keenyaan ah, waxaana isbeddelka hantidiisa sababay lacag fiican oo uu ku helay waraaq uu u diray idaacadda BBC.
Waddanka Kenya waxaa uu ku caanbaxay laaluush iyo musuqmaasuq, oo in uu qof madax ahi hanti uusan shaqaysan helaa ma aha arrin uu qof Kenya yaqaani la yaabo, waxaase yaab leh in uu laaluushkii Kenya dhexdabaashay saxaafadda iyo siyaasadda soomaalida, oo hal waraaq oo BBC loo diray lagu helay lacag ku dhow boqol kun oo doollarka maraykanka ah.
Dad badan oo aan anigu ka mid ahay waxaa aannu laaluushkaas iyo waraaqda BBC loo diray sii ogaanney dhawr maalmood ka hor habeenkii lacagta la kala qaatay, waxaase la isku khilaafay lacagta uu Faarax qaatay tiradeeda, oo dadkii xogogaalka ahaa uu qaarbo in ku sheegay, in kasta oo xisaabaha iskhilaafsani aysan aad u kala fogayn oo ay 70 ilaa 90 kun oo doollarka maraykanka ah u dhexeeyeen.
Qabanqaabada lacagtaas iyo waraaqda BBC loo dirayba waxaa dadka abaabuley oo u dhididey ka mid ahaa tifaftiraha laanta af soomaaliga mudane Yuusuf Garaad Cumar, oo sii ballanqaaday in uu arrinta waraaqda aad u buunbuunin doono markii uu Faarax Macallin BBC soo gaarsiiyo.
Sidii uu Yuusuf hawshaas weyn u ballanqaaday ayuu u fuliyey, oo markii uu waraaqdii gacanta ku dhigay buu asaga oo neeftuuraya waxaa uu dhegaysteyaasha laantooda ka codsaday in ay ku walaahoobaan xiisaddii ay lacagta badani kaga baxday Yuusuf iyo dad ay isku laabxaaran yihiin, oo ka mid ah ganacsatada iyo siyaasiyiinta soomaalida.
Inta aynaan waanada iyo waxistusaalaynta aad u sii gudagelin ayeynu eegaynaa bal shareecadda islaamu mowqifka ay ka taagan tahay laaluushka ama rishwada. Denbiyada xaaraanta kuwa ugu waaweyn waxaa lagu gartaa in ay nusuustu ku darto ereyga ”lacna”, oo ah in uusan qofkii denbi noocaas ah lagaa jannada Rabbi gelayn!
Haddaba laaluushku waxaa uu ka mid yahay waxyaalo farokutiris ah oo uu nabigu CSW qofkii ku tillaabsada sheegay in ay lacanadda Rabbi korka ka fuulayso. Qofka dhiiba iyo midka qaataba waxaa loo ballanqaaday naarta Jahannama, waxaana xoolaha ay dadku sida xaaraanta u kala qaataan ku soo degey tobaneeye aayadood oo ay mid kastaa naar ama caro Rabbi xanbaarsan tahay.
Laaluushka waxaa xagga diinta islaamka ka daran nooc ka mid ah beenta oo khaas ah. Beenta dadka sheega oo dhan waxaa uu Qur’aanka kariimka ahi u adeegsadey erey ”lacna” oo aynu hore u soo fasirnay, waxaase jirta been gaar ah oo ka mid ah denbiyada qofkii caadaystaa uu ehelunaar yahay.
Haddii ay beentu aad u fiddo oo ay meelo ama dalal badan dadku isla dhexmaraan waxaa qofkii beentaas abuuray afka laga gelin doonaa toorrey naar ah oo labadiisa qawlal lagu kala goyn doono! Isla markiiba labadiisa can waa ay biskoonayaan, markaas ayaa degdeg billaawihii naarta ahaa afka loogu celin doonaa.
Sidaas keli ah turufotooreyaasha ay beentoodu faafto looma naaro, ee waxaa lagu tuuraa barkad ay biyo naar ahi ka buuxaan, oo mar kasta oo ay madaxa kor ula soo baxaan waxaa afka lagaga dhuftaa dhagax weyn oo kulul, markaas ayuu ehelunaarka baraagtaas cadaabka ah iyo dhagaxaas ciqaabeed madaxiisu u dhexeeyaa!
Haddaba Faarax Macallin, Yuusuf Garaad iyo dadkii kale oo kala qaybqaatay lacagtaas xaaraanta ah iyo wararka madalhufinta ah waxaa u furan in ay Rabbi u toobad keenaan. Waxaa qofka muslimka ahi markii uu toobadkeenayo ku waajib ah in uu joojiyo xumaantii uu faraha kula jirey, in uu ka shallaayo denbigii uu ku tuntay diinta islaamka iyo in uu go’aansado in uusan mar danbe denbi noocaas ah u noqon.
Haddii uu qofka caasiga ahi qabo xaq ay dad leeyihiin sida xoolo laaluush ah ama uu dad been ka sheegay waa in uu cafi iyo masaabax ka baryaa dadkii uu xaqooda qaatay ama uu dhibay, isla markaas haddii uu been faafiyey waa in uu dadkii ay beentu gaartey mar labaad qaylodhaan u diraa, oo uu turufadii uu ummadda ku dhexfidiyey dib u beeniyaa.
Haddaba walaaleheen Faarax Macallin, Yuusuf Garaad, kuwii kale oo lacagta wax ka dhiibey iyo wereyeyaasha xumaantaas ku shaqeeyey waxaa u furan in ay Rabbigii abuuray u soo laabtaan. Toobadda lama aqbalo haddii ay qorraxdu meeshii ay u dhaci jirtey ka soo baxdo iyo haddii uu qofku sii dhimanayo oo uu sakaraad yahay. Sidaas awgeed ilaa imminka fursad bay dadkaas Rabbigood caasiyey oo ku tuntay shareecada islaamka haystaan, oo waa in ay toobad nasuux ah, imaan saaddiq ah iyo camal saalix ah la yimaadaan.
”Lacna” macneheedu waa in qof laga qadiyo naxariista Rabbi, waxaana halkaa inoogu dhammaaday arrimihii laaluushka, waxaa aynuna uga sii gudbaynaa in aynu maqaalka qabtiisa labaad galno.
Bilihii la soo dhaafay waxaa siyaasadda soomaalida aad uga hadlay labo nin oo aan ayaamahaan ka hor afdheerayn. Midka kowaad waa Cali Khaliif Gallayr oo waagii uu Carta ka tirsanaa aad u afgaabnaa. Weligiis asaga oo hadal kulul ku hadlaya lama arag markii uu Carta ku jirey, waxaana si ihaano ah u cayriyey Cabdiqaasim, dabadeedna Cali waxaa uu u aammusay sidii qabrigii shiikh Cabdulqaaddir-Jiilaani oo kale.
Muddadaas waxaa uu Cali ahaa miskiin misko la fuulo leh oo ilmirigle ah, oo dhego nugul. Ilaahay amarkiis Cali bilihii la soo dhaafay buu waxaa uu u dillaacay geesi aan libiqsan, oo sida rati qooqan afka ka xunbeeya, oo miciyaha lista. Waxaa la wada og yahay in uu Cali mar Maxamed Siyaad lacag u dhiibtey si uu alaabo ugu soo iibiyo, oo uu Cali lacagtii la dhuuntay! Lagactaas markii uu la dhuuntay ayuuba geesi ahaa, ee Carta waxaa saarnayd habbiso uusan erey soo celin karayn!
Soomaalidu waxaa ay ku maahmaahdaa ”Labeeb hal mar buu niyoodaa, waana markii uu hooyadiis arko”, waxaa aynuna uga sii gudbaynaa siyaasiga labaad oo ah Sakeriye Maxamuud xaaji Cabdi, kaas oo ah nin aysan hadda ka hor cidina hadalkiisa maqal.
Waxaa la sheegaa in uu Sakeriye ka mid ahaa Carta, waxaa uuna xilligaas laasimey aammus aan afkiisa erey soo marin iyo ilmiriglenimo uu hoos eego. Afar sannadood nin uu hadalku ku dhegganaa waxaa la islahaa ”Hal bil qadday beri kuma ay dari weydo”, laakiin sidii Cali ayuu hal mar hagoogta iska tuuray, oo uu hadlay. Idaacad kasta waxaa laga soo daayey asaga oo geesi ah oo gabdho iyo wiilal la murmaya, oo aysan cidina ka hadal badnayn.
Ilaahay Carta Sakeriye waa uu uga raayey oo codkii baa u furmay, waxyaalihii uu oggolaan jireyna maanta ma uu oggolaan karo! Waayadii hore oo ay soomaalida duruufeheedu iska qallafsanaayeen buu nin magaalada Hargeysa yimid gabar lacag ay qaadan jirtey u soo taagey, markaas ayey ayada oo asaga si gaar ah u diiddan waxaa ay ku tiri: ”Waar waa lagu sheeko xumeeyey ee iga leexo”, markaas ayuu gabay uu tiriyey waxaa uu ku dhammeeyey:
”Ma anaan caddaankaygu socon, uunku wada caagye”
”Caddaan” waa lacag, isla markaas ”caagid” waxaa uu ka wadaa ”dhereg” joogto ah.
Abwaan Yamyam oo Barnaamij Dhaqameed Kusoo Bandhigay Jaamacada Bariga Afrika